Banyere Anyị-okomoko nkwari akụ foset emeputa
Armati-- China foset Manufacturer maka okomoko Hotel Project.
Armati bath ngwaike, na-eduga emeputa nke elu-ọkwa ịdị ọcha brand na Asia-Pacific Region. Anyị nwere ụlọ ịwụ foset ngwaike mmepụta osisi na Southern China Jiangmen obodo (Heshan) .Anyị nwekwara acquird a German n'ichepụta mmekọ. Early si 1966 anyị abuana n'ime ụlọ ịwụ imewe ụlọ ọrụ, malite na n'etiti afọ 1990s, anyị na-amalite foset na bath kwesịrị ekwesị mmepụta ụlọ ọrụ, karị na Foshan na Heshan City.Our ngwaahịa ige agụnye okomoko na elu ọgwụgwụ foset, hotel ụlọ ịwụ ngwaike ngwa mma, nkwari akụ ịsa usoro, ụlọ mposi flushing valvụ, akpaka sensor foset, na zuru ezu na ukwuu ahaziri wuru nkume ụlọ ịwụ efu na bathtube.
Amati ụlọ ịwụ aghọworị OEM n'ichepụta na onye òtù ọlụlụ maka ọtụtụ German na Italian maara nke ọma ika, gụnyere nnọọ ama Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti na na, mgbe ụfọdụ, anyị na-emepụta zuru ezu nlereanya, mgbe ụfọdụ anyị na-enye akụkụ na components.With elu mma ngwaahịa na elu atụnyere resonable price, anyị ọma dọtara isi ise kpakpando Hotel Management Group na Asia-Pacific Region ma na-anyị na-okwu na onye òtù ọlụlụ, dị ka Kempinski, Sheraton, The Venetian na ọtụtụ ndị ọzọ. (Lelee na-esonụ maka Armati hotel oru ngo ikpe ọmụmụ)
Na Chinese anụ ụlọ ahịa, anyị na-elekwasị anya na okomoko nkwari akụ oru ngo market.All anyị n'ógbè nkesa na-ukara nkesa nke GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT .Anyị Bụ na-soplaya nke kasị superstore na ụwa dị ka Walmart,The Home ebusa, Lowe si, anyị ga-amasị ịgbasi anyị mba ahịa òkè maka okomoko nkwari akụ ahịa nke. (Lelee na-esonụ maka Armati hotel oru ngo ikpe ọmụmụ na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ)
Dị ka a ngwaike emeputa na ihe karịrị 20 afọ ahụmahụ, anyị na-akwakọba ukwuu nke ebu dị iche iche foset style na shape.Partner na Italian mmebe anyị nwere 38 usoro foset na 16 usoro bath ngwa dị ka ọkọlọtọ anyị range.But anyị nwere 30% anụ ụlọ azụmahịa dị ka omenala mepụtara, na> 50% mba azụmahịa dị ka OEM ahaziri mmepụta. (Lelee na-esonụ maka Armati foset ụlọ ịwụ ngwa ngwaahịa katalọgụ)
Anyị na-amam na-emepụta pụrụ iche foset nke ọ bụla mmebe nwere nrọ na ọchịchọ ndị! Anyị setịpụrụ ala MOQ maka OEM mmepụta, anyị nwere ike ọbụna na-emepụta ahaziri foset maka gị na oru ngo n'ụzọ pụrụ iche. mmagine na a na-emeputa ihe na otu àgwà ọkọlọtọ ka HANSGROHE, GROHE nwere ike ime ka foset accroding gị echiche, osise, ma ọ bụ foto, na ụzọ oge naanị 10 ụbọchị 4 izu. (anyị na-adịbeghị anya atụ si imewe echiche na-uka mmepụta imecha naanị 45 ụbọchị) . Nke a ga-apụ iche, pụta ìhè na kasị mma ụgbọelu nke mmebe si talent, guzobere na-asọ n'aka gị mmebe ika. Dị nnọọ ka nnọọ ama Starck Philippe. (Lelee ebe a maka Armati Custom foset maka hotel ikpe ọmụmụ)
1) ga-amasị m mara ihe ndị mere Amati, Ị na Chinese ụlọ ọrụ ma ọ bụ mba ọzọ isi obodo ekesịpde ụlọ ọrụ, na ihe mmekọrịta dị n'etiti ndị German ụlọ ọrụ?
Anyị na-multi-mba otu, anyị mmepụta isi equit na Taiwanese emeputa na management knowledge.We enwetara a Germany osisi na ọtụtụ iri afọ ahụmahụ na ịdị ọcha ware.We goro Italian ngwaahịa mmebe ike anyị model.We na-ma Chinese na German.In na Chinese anụ ụlọ ahịa na mba ahịa, anyị na-eji Amati dị ka a ika maka ịdị ọcha ngwaahịa.
2) m ga-achọ ịmatakwu nke gị mmepụta isi, dị ka ala ebe na ọnọdụ, ebe, ndị ọrụ na QC, nakwa dị ka gị size nke azụmahịa, wdg?
Anyị nwere usoro-sized mmepụta osisi na 10000 square mita na 150 worker.We na-elekwasị anya kacha elu-ọgwụgwụ ise Stars Hotel oru ngo ahịa, na-akwa omume na a market.Our ahịa na-agụnye Hotel na Interior mmebe, ngo, Mmepụta (ukwuu n'ime akwụsị onye ọrụ), retail na nkesa dịghị anyị priority.We mejuputa JIT mmepụta style.In 2015, anyị Chinese ahịa ntụgharị atuanu USD 12 nde, maka dum ike azụmahịa ntụgharị ka 35 nde USD.
3) Olee otú iji hazie foset? M nwere nanị otu oru ngo na aka, m nwere ike ịjụ iji hazie ihe foset?
Anyị nwere 50% nke mbupụ ngwaahịa maka ahịa hazie foset, ịlele ebe a maka nkọwa.
4) Your foset na-elu-ọgwụgwụ, ise kpakpando nkwari akụ ọkwa, ga-amasị m maara na ọ na zuru ezu, Ị nwere ike ịme ka ya?
Anyị na-eji nke kacha mma mma ọla ime ka foset na plating na elu ọgwụgwọ technology otu ka German ọkọlọtọ, anyị nwere onwe mbubata ọwa n'ihi àgwà akụrụngwa dị Kereox seramiiki katrij na NEOPERL aerator. (elele ebe a maka Armati foset ngwaahịa nju)
5) Ị pụrụ hotel ụlọ ịwụ ụlọ, n'ozuzu ngwugwu?
N'ezie, anyị na-emepụta ụlọ ịwụ ngwaike na ọla dị ka foset, ime ụlọ ịwụ ngwa, ịsa usoro isiokwu a, na okpokoro ịwụ n'efu, anyị nwekwara wuru nkume efu na okpokoro ịwụ ka onye na. We mara bụla nkwari akụ ụlọ ịwụ bụ ihe pụrụ iche, na-eso hotel ụfọdụ nke gburugburu ebe obibi, akụkụ ka chepụta ọ bụla ụlọ ịwụ fitting.Sometimes, ịzụ maara nke ọma ika nke ime ụlọ ịwụ kwesịrị ekwesị, o nwere ike ghara adabara gị na mpaghara ịdị ọcha ụlọ ọrụ nkọwapụta. Ọ ka mma ịchọta ahụmahụ, àgwà nkwa ahaziri emeputa ịdị na-akwado, na-elekwasị nkà mmetụta na aku na uba, Ọ bụrụ na onye ọ bụla na dị nnọọ site na iji ẹdude ika ụdị, ọ dịghị mkpa maka a mmebe.
6) Olee ebe ị rụpụtara isi, m nwere ike bịa leta gị na osisi na China?
Anyị mmepụta isi n'ebe ndịda China Jiangmen obodo (Heshan), Guangdong province.We melite ọrụ dị na Shenzhen maka anụ ụlọ ahịa, anyị nwere showroom na obodo downtown.Welcome ileta anyị osisi na-ekwurịta gị na oru ngo chọrọ. Mgbe ụfọdụ 1 ma ọ bụ 2 ụbọchị ihu na eziokwu nzukọ nwere ike idozi ọtụtụ ihe ndị ọzọ nsogbu karịa ọtụtụ ọnwa nkwukọrịta.
(Lelee ebe a maka Armati mmepụta osisi na ngwaahịa nju)